Ndị dike egwuregwu vidio ghọrọ ndị ọjọọ | Akụkọ akụrụngwa
Ndị dike egwuregwu vidio ghọrọ ndị ọjọọ
Ọ bụghị ndị niile na-eme ihe nkiri vidio amụrụ site na nsogbu na ọchịchịrị gara aga, na-eje ozi ọjọọ ma ọ bụ ihe ha na-achọ naanị ọdịmma onwe ha ebe ọ bụ na akụkụ aghụghọ ahụ rafuru ha: ọtụtụ n'ime ha nwetara metamorphosis n'ihi ọdachi ụfọdụ nke gosipụtara ndụ ha ruo mgbe ebighị ebi.
Bọ ọbọ ma ọ bụ iberibe adịla na akụkọ ndụ ụfọdụ, ma taa, anyị ga-enyocha akụkọ banyere ụfọdụ ndị omekome a na-ewerebu ha dịka ezigbo ndị dike, rue oge ahụ mgbe ndụ ọjọọ jiri ndụ ha dakwasị ha. nke kachasị njọ.
Onye protagonist nke Prototype o tinyere aka na nkata ebe nje na-eme ka ụmụ mmadụ gbanwee ghọọ ihe ndị e kere eke dị egwu. Ọnọdụ a họọrọ maka egwuregwu vidio a bụ New York, ebe nkà dị egwu na ahụike dị elu nke gore gara aka na egwuregwu a ebe onye isi ya ga-abụ onye na-emegide onye na-esote ya ebe dike ọhụrụ ahụ nwere ezigbo ahịa Mercer maka ogbugbu nke ezinụlọ ya na otu n'ime mmemme oriri na-enweghị nchịkwa a na-ahụkarị Prototype.
Siegfried izizi pụtara na Mkpụrụ obi onu dị ka onye ọchịagha mikpuru na ịchọ onye gburu nna ya. N'ezie, ọ maara ogbu ọchụ ahụ karịa onye ọ bụla, mana ncheta ndị ahụ dị egwu dị n'ime mkpụrụ obi ya. Ebe ọ bụ na ọ ji mma agha a bụrụ ọnụ nke Mkpụrụ obi onu, ghọrọ Nrọ abalị, onye ruo ogologo oge bụ onye na-emegide onye a na-ewu ewu na Namco ọgụ saga.
Nnukwu onye isi
Anyị ka nwere ọhụụ nke ise a gụrụ ọnụ nke saga kacha ewu ewu nke Hideo Kojima, ma ọtụtụ kwetara na Ngwongwo siri ike nke 3 bụ nke kachasị mma na isi nke aha niile, nke mere ka anyị laghachi n'oge Cold War na nke webatara anyị maka oge mbụ na akpụkpọ Agwọ Gba ọtọ. Ọ bụ ihe dị egwu dị ka mmadụ ole na ole ndị ọzọ na ịkpa agha nke onye agha ahụ mere ka ọ nweta aha nke Nnukwu onye isi site n’inwe mmeri di ilu megide onye nkuzi ya ọ huru n’anya. Mgbe e mesịrị, na metal Gear site na 80s, Nnukwu onye isi kpughere onwe ya dị ka onye aghụghọ ma merie ya na ya mmepụta oyiri, Agwọ siri ike.
Captain-acha anụnụ anụnụ
Ọchị mara mma Ọ bụ usoro dị ebube, nke mbụ, na-achọ ma dị mma nke anyị nwere ike iji ike dị iche iche dị ka ịgbatị ngwa ngwa nke onyonyo, belata ya ma ọ bụ iji mbugharị, dị ka a ga - asị na anyị na - achịkwa ihe nkiri nke ihe nkiri. Onye protagonist nke egwuregwu ahụ, Joe, Enwere m mmasị dị ukwuu maka abụba ahụ, onye isi awọ na-acha ntutu isi aha ya Captain-acha anụnụ anụnụ, onye, ​​ọ bụ ezie na mmalite nke njem ahụ dị ka onye enyemaka, n'ikpeazụ ọ bụ onye isi nke nzukọ rụrụ arụ Jaadị.
Aha ikpeazụ nke akụkọ akụkọ ifo saga Castlevania na-agba ọsọ site na Spanish si Ugboro Mercury, onye degharịrị akụkọ vampire ahụ ma mee ka anyị mata dike ọhụrụ, Gabriel Belmont, a knight nke hoodtù ofmụnna nke Ìhè mikpuru onwe ya na mmeri nke ndị nwenụ nke Ọchịchịrị, n'amaghị nnukwu ego ọ ga-akwụ iji mechie njem ahụ. Na oge ufodu, Castlevania: Ndị nwenyịnya nke abụọ, Gabriel pụtara n'ihu onye ọkpụkpọ ahụ dịka onyenwe ụjọ nke vampires: nke ahụ Dọkịta.
Mbupute na arcade di ebube Ikpeazụ ọgụ, ebe o naputara enyi ya nwanyi, Jessica, ma mechie ike nke Mad gia en Obodo Obodo, ndị ọrụ ibe ya nyeere aka Guy y Haggar. Ga-alaghachi na Street fighter alpha 3 yi a mkpọrọ jumpsuit na ọhụrụ ekike ama a karịa a na-enye ìhè enyere anyị aka ịmata nke ọhụrụ ga-eme n'ọdịnihu nke Cody: Mgbe ya na onye òtù ọlụlụ ya gbasasịrị, agụụ ọgụ n'okporo ámá riri ya isi, ruo n'ókè nke na ọ kwụsịrị ịsụ ngọngọ ọkpụkpụ ya n'ụlọ mkpọrọ. N'ikpeazụ, anyị ahụwo ya na Street Fighter IV na onye mara ma ọ ga-abụ akụkụ nke ndepụta nke isi nke ise nke aha a.
Okpukpe augustus ọ bụ ya bụ agwa mbụ anyị jisiri ike na kpochapụwo Ebighi Ebi na Egwuregwu Cube. Akụkọ ya malitere na 26 BC na Persia oge ochie, ebe ọ chọrọ iweghachite ihe ochie maka eze ukwu ya. Otú ọ dị, njem ahụ nwere ọdachi na Dị nsọpụrụ ChinekeN'ịbụ onye ike nke Ndị Ochie duhiere, ọ nwere mmụọ nke otu n'ime ndị a wee bụrụ ohu kwesịrị ntụkwasị obi, nke rere ure na onye nwụrụ anwụ nke chi echefuru echefu.
Tupu ị ghọọ otu n'ime ndị ọjọọ kachasị ama ama ama na ụwa nke egwuregwu vidio, Sephiroth bụ ihe n exemomi na ike nke SOLDIER, ebe ọ ruru n'ọkwá dị elu n'ime eserese nzukọ ya. Otú ọ dị, ịmụta eziokwu banyere oge gara aga mere ka ọ ghọọ onye nsogbu na-enwe akpịrị ịkpọ nkụ maka imegwara. Mmadu ole na-echeta ebe onodu onodu ojoo Aisis?
En Akụkọ Ifo Mortal Kombat, Bi-Han Ọ bụ onye aghụghọ ahụ aghụghọ Quan Chi iji weghachite amulet dị nsọ nke Shinnok. N'ịbụ onye ọdachi ahụ na-abịanụ nke ya onwe ya malitere, a manyere ya ịbanye na Hel iji weghachite ihe egwu ahụ dị egwu, na-achịkwa imeri Ajụjụ, inwe Shinnok na Hoodmụnna nke Onyunyoma nkpuru-obi ya ji ihe ọjọ metọ ya. Ná ngwụsị nke asọmpi mbụ nke efu Kombat, iwe akpị, kpuru ìsì maka imegwara - kpughere ya Bi-han en Akụkọ ifo MK- ma jikwaa ya Quan Chi, na-ejedebe ndụ nke onye na-eti mkpu, onye a ga-eweghachi dị ka Noob saibot n'ime ala ma sonyere n'òtù ụmụnna nke ọ lụrụ ọgụ na mbụ.
na Donkey Kong nke 1981, Jumpman, na pixelated dike nke egwuregwu, ọkwá nkà ahia na na mgbe e mesịrị anyị ga-amarakwa dị ka Mario -na na ọ ga-agbanwe ọrụ ya ka ọ bụrụ nke plọmba-, o nwere mkpali ziri ezi ọ ga-eche ihu Donkey Kong iji zọpụta nwa ya nwanyị. Ma, ọ bụghị afọ ojuju n'ịrụzu ọrụ ya, Mario kpebiri imechi onye na-agba ya iwe, na-ahapụ a Donkey Kong Junior na nwa mgbei na na ọ ga - eme ihe niile nwere ike ime iji hapụ nna ya na ntanetị pụrụ iche.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Home » Videogames » Ndị dike egwuregwu vidio ghọrọ ndị ọjọọ
5 ihe mere ị ga-eji zụta BlackBerry Priv